တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုသည်သတ္တု Detector ဂိတ်, သတ္တု Detector ဂိတ်ကမ်းလှမ်းရန်
ဖေါ်ပြချက်:သတ္တု Detector ဂိတ်,လေဆိပ်သည်သတ္တု Detector ဂိတ်,ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု Detector,လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုသည်သတ္တု Detector ဂိတ်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk > သတ္တု Detector ဂိတ်
သတ္တု Detector ဂိတ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, သတ္တု Detector ဂိတ်, လေဆိပ်သည်သတ္တု Detector ဂိတ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု Detector R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Fungsi သတ္တု detector မှတဆင့်လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector သတ်မှတ်ချက်မှတဆင့် Walk  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector ဂိတ်ပေါက်မှတဆင့် Walk  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
detector က de Metal (MS-6006)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
detector မှတဆင့်လိုလားသူလမ်းလျှောက်မှာမဟုတ် Garrett  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတဆင့်မြင့်သော quanlity လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတစ်ဆင့်တံခါးကိုဘောင်လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတဆင့်စီးပွားရေးလမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector လုံခြုံရေးဂိတ်ပေါက်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fungsi သတ္တု detector မှတဆင့်လမ်းလျှောက်
ထုပ်ပိုး: စက္ကူစက္ဏူထူ, သစ်သားကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း, အပြည့်အဝသစ်သားစက္ဏူထူ (အပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ် RMB200 / set ကို)
Supply နိုင်ခြင်း: 1800Sets/Month,3days
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: optional 8 သို့မဟုတ် 10 ထောက်လှမ်းဒေသများတွင်ပိုပြီးတိကျစွာသတ္တုများကိုနေရာချခြင်းမှမြင့်မားသောရောင်ခြည် LED ညွှန်ပြချက်ရှိပါတယ်။ Smith သတ္တု detectors အ...
သတ္တု detector သတ်မှတ်ချက်မှတဆင့် Walk
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: optional 8 သို့မဟုတ် 10 ထောက်လှမ်းဒေသများတွင်ပိုပြီးတိကျစွာသတ္တုများကိုနေရာချခြင်းမှမြင့်မားသောရောင်ခြည် LED ညွှန်ပြချက်ရှိပါတယ်။ သတ္တု detector...
သတ္တု detector ဂိတ်ပေါက်မှတဆင့် Walk
အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်သတ္တု detectors အ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 285 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 800Sets/Month,5days
MS-1006 ခြောက်လဇုန်လက်တွေ့ကျတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် မြင့်မားသော, အနိမ့်, စကားအနှိုးဆော်သံ mode ကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယအတွက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ သတ္တု detector...
detector က de Metal (MS-6006)
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: optional 8 သို့မဟုတ် 10 ထောက်လှမ်းဒေသများတွင်ပိုပြီးတိကျစွာသတ္တုများကိုနေရာချခြင်းမှမြင့်မားသောရောင်ခြည် LED ညွှန်ပြချက်ရှိပါတယ်။ တံခါးကို Frame ကသတ္တု Detector,...
detector မှတဆင့်လိုလားသူလမ်းလျှောက်မှာမဟုတ် Garrett
MS-1006 ခြောက်လဇုန်လက်တွေ့ကျတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: မြင့်မားသော, အနိမ့်, စကားအနှိုးဆော်သံ mode ကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယအတွက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။...
သတ္တု detector မှတဆင့်မြင့်သော quanlity လမ်းလျှောက်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 330 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 1060Sets/Month,7days
MS-2006 ခြောက်ဇုန်စံဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: တစ်ခုချင်းစီကိုထောက်လှမ်းဇုန်၏ sensitivity ကိုလွတ်လပ်စွာ 0-99 အကြားချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ သတ္တု detector မှတဆင့်လမ်းလျှောက်တံခါး, သတ္တု...
သတ္တု detector မှတစ်ဆင့်တံခါးကိုဘောင်လမ်းလျှောက်
သတ္တု detector မှတဆင့်စီးပွားရေးလမ်းလျှောက်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 435 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 1100Sets/Month,6days
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: တစ်ဦးထက်ပိုတံခါးများအုပ်စုတစုအတွက်အတူတကွ max ကို 20 အစုံတံခါးများအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကျော်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှု။ နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ■...
သတ္တု detector လုံခြုံရေးဂိတ်ပေါက်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: optional 8 သို့မဟုတ် 10 ထောက်လှမ်းဒေသများတွင်ပိုပြီးတိကျစွာသတ္တုများကိုနေရာချခြင်းမှမြင့်မားသောရောင်ခြည် LED ညွှန်ပြချက်ရှိပါတယ်။ လက်မှတ်များ &...
တရုတ်နိုင်ငံ သတ္တု Detector ဂိတ် ပေးသွင်း
ညာဘက်ကြောင့်သတ္တု detector တံခါးဝကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ဖုန်းခေါ်လွယ်ကူပါတယ်။ တရုတ်သတ္တု detector တံခါးကိုတကမ္ဘာလုံးနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုနေကြတယ်။ မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector တံခါးဝကိုထိခိုက်ခံရခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဝါဒအားဖြင့်ပျက်စီးခံရခြင်းမှလူရဲ့အသက်တာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သတ္တု detector မှတဆင့်တရုတ်လမ်းလျှောက်စျေးပေါဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကောင်းလှ၏။ နှင့်လည်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတန်ဖိုးရှိ 1 နှစ်အာမခံ, ပူဇော်!
သတ္တု Detector ဂိတ် လေဆိပ်သည်သတ္တု Detector ဂိတ် ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု Detector လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုသည်သတ္တု Detector ဂိတ် Okm သတ္တု Detector ဂိတ်